The term "Mobile Solution Developer" – Aung Pyae Phyo – Medium
The term "Mobile Solution Developer"
မှတ်မိသေးတယ် .. လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်နှစ်လောက်က Singapore မှာ မြန်မာကုမ္မဏီတွေ Job Fair လာလုပ်တာ .. Job fair မှာက MAI, Max Myanmar, Aya Bank တို့လို ကုမ္မဏီအကြီးတွေ တော်တော်များများပါတယ် .. နောက်ပြီး စက်ာပူက မြန်မာတွေအကြိုက် စာပေဟောပြောပွဲလေးကလဲ ပါတော့ ကိုယ်တွေလဲ သွားရတာပေါ့ ..
ဟိုရောက်တော့ နဂိုကတည်းက ကိုယ်စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ banking sector က ကုမ္မဏီတွေပဲ ကြည့်မိပါတယ် .. Bank တွေထဲမှာလဲ Aya bank က IT နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး modenize ဖြစ်တယ် ဆိုတော့ Aya bank ရဲ့ boot မှာ Mobile Solution Developer လေးများ ခေါ်နေမလား လို့ ဝင်မေးကြည့်မိတယ် .. ဒါပေမဲ့ ခက်တာက အဲဒီက Manager ဆိုသူကအစ Mobile Solution ဆိုတဲ့ concept ကို ကောင်းကောင်း နားမလည်တာပဲ .. ဒီ Post ဒီ Post တွေပဲ ရှိတယ် ပေါ့နော် .. လျောက်ချင်လျောက်ခဲ့ပေါ့ ... ထားပါတော့ .. အဓိက ပြောချင်တာက
Mobile Solution Developer ဆိုရင် တစ်ချို့ကလဲ ဒါ Mobile Application Developer နဲ့ အတူတူပဲ လို့ ထင်ကြတယ် .. တစ်ချို့ကလဲ ဒါ Android လား iOS လား Hybrid လား စသည်ဖြင့် သိပ်မသဲကွဲကြသေးဘူး .. Mobile Solution ဆိုတာ Mobile Application နဲ့ ဆင်တဲ့ အချက်တွေ ရှိသလို မတူတဲ့ အချက်တွေ .. ကွဲနေတဲ့ အချက်တွေလဲရှိပါတယ် ..
ဆင်တဲ့ အချက်တွေက Mobile Solution တစ်ခုရဲ့ final result က Mobile Application တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် .. အဓိက မတူတဲ့ အချက်တွေကတော့ solution တစ်ခု create လုပ်ဖို့ ချဉ်းကပ်သလို ချဉ်းကပ်ရတာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် (၁) ကိုယ် solve လုပ်မဲ့ problem ကို ကောင်းကောင်း ကျေကျေညှက်ညှက် နားလည်ရပါတယ် .. (၂) သုံးမဲ့ User ရဲ့ persepctive နဲ့ usability stand point ကို ကောင်းကောင်း establish လုပ်ထားရပါတယ် (၃) solution ဟာ အမှန်အကန် problem ကို solve လုပ်သွားရပါမယ် (အဲဒီ အတွက် track လုပ်မဲ့ measurement matric တွေ design လုပ်ရပါတယ်)
Solution Developer တစ်ယောက်ဟာ ကိုယ်တိုင် App ကို ဝင် coding လုပ်ချင်မှ လုပ်မယ် .. ဒါပေမဲ့ deliverable ကို တာဝန်ယူပေးရတယ် (code review, test cases, continous delivery, etc)
Solution Designer နဲ့ ကွဲတဲ့ အချက်တွေက designer က ထွက်လာမဲ့ solution ရဲ့ User stories တွေ user experience တွေ conversion rate တွေ improve ဖြစ်အောင် တာဝန်ယူပေးရတာ များပြီး Solution Developer က robustness နဲ့ usability ကို တာဝန်ယူပေးရတာ များပါတယ် ..
အမှန်တော့ Solution Designer နဲ့ Solution Developer က solution နဲ့ ဆိုင်တဲ့ အပေါ်က အချက်တွေအကုန်လုံးကို establish & map-out လုပ်ပြီးတော့မှ solution ကို upper management (ဒါမှ မဟုတ် client) ဆီကနေ approval ယူပြီး coding process စတာပါ ..
Solution Developer. အနေနဲ့ coding phase စပြီ ဆိုရင်လဲ App ရဲ့ skeleton architecture ကို define လုပ်ပေးတာ .. best practise တွေ သတ်မှတ်ပေးတာ .. feature implementation guideline တွေ ချပေးတာ .. စတာတွေ ကို တာဝန်ယူရပါသေးတယ် ..
Solution designer နဲ့ Solution developer ရဲ့ အထက်မှာ solution manager ဆိုတာ ရှိပါသေးတယ် .. Standard Chartered လို Org အရမ်းကြီးတဲ့ Bank မှာတော့ business requirement တွေကို ဖြည့်ဆည်းဖို့ အခုလို solution level ကနေ ချဉ်းကပ်ပါတယ် .. agency (software house) ဆိုရင်တော့ solution manager ဆိုတာ project manager နဲ့ တူတူပါပဲ .. product company ဆိုရင်တော့ solution manager က product manager ဖြစ်နေတတ်ပါတယ် ..
မြန်မာနိုင်ငံမှာ user ကို အခြေခံတဲ့ digital product တစ်ခု အမှန်တကယ် take off ဖြစ်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ basic requirement တွေ အများကြီး ချို့တဲ့နေပါသေးတယ် .. အထူးသဖြင့် user ဆီက ပိုက်ဆံကို electronically လက်ခံဖို့ ခဲယဉ်းနေသေးတာ က အစ .. market မှာရှိတဲ့ user ရဲ့ technical maturity အထိ ..
ဒါပေမဲ့ အမှန်အကန် လည်ပတ်နေတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ ရှိနေတဲ့ အတွက် .. အဲဒီ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာရှိနေတဲ့ problem တွေကိုတော့ digital solution တွေ mobile solution တွေ နဲ့ ဖြေရှင်းလို့ ရနေတဲ့အတွက် agency (software house) business ဟာ အမှန်တကယ် problem ကို solve မဲ့ solution တွေ propose လုပ်နိုင်တဲ့ ကုမ္မဏီတွေအတွက် အကျိုးအမြတ်များမယ် လို့ မြင်မိတယ်
ဉပမာ Skynet ဒါမှမဟုတ် 4TV channel .. သူတို့အတွက် user engagement နဲ့ conversion ကို improve လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ user-facing mobile app (solution) မရှိသေးဘူး
နောက် ဉပမာ အနေနဲ့ အခု bank တွေက အာမခံတွေရောင်းနေကြတယ် .. အဲဒီ အာမခံတွေရောင်းတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေ သူတို့ client တစ်ယောက်ကို အာမခံနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး pen & paperနဲ့ ရှင်းပြဖို့ အချိန် ဘယ်လောက်ကုန်မလဲ .. conversion rate ကရော ဘယ်လောက် percentage ရှိလဲ .. ဒီ sale man တွေ အတွက် time ကို လျော့ပြီး conversion rate ကို improve လုပ်နိုင်မဲ့ mobile solution တစ်ခုသာ propose လုပ်နိုင်မယ် ဆိုရင် bank တွေအနေနဲ့လဲ ငွေပိုဝင်မှာဖြစ်တဲ့ အတွက် သုံးဖို့ စိတ်ဝင်စားမှာပဲ ..
ဒါပေမဲ့ အဓိက catch က solution ဖြစ်ရပါမယ် .. application ဖြစ်ရုံနဲ့ မရပါဘူး .. application က သူ implement လုပ်ထားတဲ့ process တွေ အကုန်လုပ်လို့ ရနေရုံနဲ့ တာဝန်ကျေပြီ ဆိုပေမဲ့ solution တစ်ခုကတော့ final business goal ကို အမှန်တကယ် meet ဖြစ်တဲ့ .. problem ကို အမှန်တကယ် solve ဖြစ်တဲ့ solution ဖြစ်မှ ရပ်တည်နိုင်မှာပါ ။
Mobile Solution Developer ဆိုတာ အဲလို solution မျိုးကို create လုပ်သူ ဖြစ်ပါတယ် ။
Clapping shows how much you appreciated Aung Pyae Phyo’s story.